Antony 10 Very Very Organic ny tranokalanao ... Ary inona no hatao | Martech Zone
Misy antony maromaro mahatonga ny tranonkalanao ho very ny fahitana amin'ny fikarohana voajanahary.
Fifindra-monina amin'ny sehatra vaovao - Na dia manome fomba hampahafantarana azy ireo aza i Google fa nifindra tamina sehatra vaovao ianao tamin'ny alàlan'ny Search Console, dia mbola misy ihany ny olana amin'ny fiantohana ireo rohy miverina any rehetra any hamaha URL tsara ao amin'ny fonenanao vaovao fa tsy pejy tsy hita (404) .
Fahazoan-dàlana fanoratana - Nahita tranga maro tamin'ny olona nametraka lohahevitra vaovao, plugins, na fanovana CMS hafa aho izay nanova tsy nahy ny toerana anaovany azy ireo ary nanakana ny tranokalany tsy ho voadinika tanteraka.
Metadata ratsy - Ny motera fikarohana dia tia metadata toy ny lohateny sy ny famaritana pejy. Matetika aho no mahita olana izay tsy misy mponina tsara ny mari-pamantarana lohateny, mari-pamantarana lohanteny, famaritana ary mahita pejy miverimberina ny motera fikarohana… ka ny sasany amin'izy ireo ihany no ampidiriny.
Fandraisana andraikitra amin'ny finday - Ny finday dia manjaka amin'ny fangatahana fikarohana biolojika maro, noho izany ny tranokala tsy voatsara dia mety hijaly tokoa. Ny fanampiana ny fahaizan'ny AMP amin'ny tranokalanao dia mety hanatsara be ny fahafahanao ho hita amin'ny fikarohana finday. Ireo motera fikarohana dia manitsy ny famaritana ny fandraisana andraikitra amin'ny finday satria nivoatra ny fizahana finday.
Manova ny firafitry ny pejy - Ny singa ao amin'ny pejy iray ho an'ny SEO dia fanao mahazatra - manomboka amin'ny lohateny ka hatrany amin'ny lohateny, hatrany amin'ny sahy / mavesatra, hatrany amin'ny haino aman-jery sy ny alt… raha manova ny firafitry ny pejinao ianao ary mandahatra ny laharam-pahamehan'ny singa, dia hanova ny fomba fijerin'ny mpikaroka ny atiny ary mety ho very ny laharana amin'ity pejy ity ianao. Ny motera fikarohana dia mety manova ny lanjan'ireo singa ao anaty pejy ihany koa.
Fiovan'ny laza - Indraindray, tranonkala iray manana fahefana an-taonina maro no miala amin'ny fampifandraisana anao satria nanamboatra ny tranokalany izy ireo ary nandatsaka ny lahatsoratra momba anao. Efa nanamarina ve ianao hoe iza no milahatra aminao ary nahita fiovana?
Fampitomboana ny fifaninanana - Mety hanao ny vaovao ny mpifaninana aminao ary hahazo backlinks an-taoniny maro izay hampiakatra ny laharany. Mety tsy misy azonao atao momba an'io mandra-pahatapitry ny spike na hampiakatra ny fampiroboroboana ny atiny anao manokana.
Fironana amin'ny teny lakile - Efa nojerenao ve ny Google Trends mba hahitanao ny fomba itadiavan'ny fikarohana ireo lohahevitra izay nalahatrao? Sa ny terminolojia tena izy? Ohatra, raha niresaka momba ny tranokalako finday avo lenta amin'ny fotoana rehetra, mety te-hanavao izany teny izany aho finday satria io no teny manjaka ampiasaina ankehitriny. Azoko atao ihany koa ny mijery ny fironana amin'ny fizaran-taona eto ary miantoka ny paikadin'ny votoatiko hitandrina ny fironana fikarohana.
Self-nanelingelina - Ho gaga ianao amin'ny impiry ny pejinao manokana no mifaninana amin'ny tenany amin'ny motera fikarohana. Raha manandrana manoratra lahatsoratra bilaogy isam-bolana amin'ny lohahevitra iray ihany ianao, dia manaparitaka ny fahefanao sy ny backlinks anao amin'ny pejy 12 hatramin'ny faran'ny taona. Aza hadino ny mikaroka, mamolavola ary manoratra pejy tokana isaky ny lohahevitra mifantoka - ary avy eo dia tazomy vaovao io pejy io. Naka tranonkala nidina hatramin'ny pejy an'arivony ka hatramin'ny pejy an-jatony izahay - nanitsy ny mpijery araka ny tokony ho izy - ary nijery ny fivezivezena ara-organika indroa.
Mitandrema amin'ny loharanon-karena misy anao
Mahagaga ny isan'ireo olona ananako mangataka ny fanampiako amin'izany. Mba haharatsy azy kokoa, matetika izy ireo dia manondro sehatra na masoivohon'ny SEO ary miady amin'ny zava-misy fa tsy naminavina ny olana ireo loharanom-pahalalana ireo ary tsy afaka nanampy tamin'ny fanitsiana ny olana.
SEO Tools - Be loatra ny am-bifotsy SEO fitaovana izay mbola tsy notohizana. Tsy mampiasa fitaovana fanaovana tatitra aho raha hiteny amiko hoe inona no tsy mety - mandady ilay tranokala aho, mitsoroka anaty kaody, mijery ny toerana rehetra, mijery ny fifaninanana, ary avy eo manome sori-dalana momba ny fomba hanatsarana. Google aza tsy afaka mitazona ny Search Console alohan'ny fanovana algorithm… ajanony ny eritreritra ny fitaovana sasany!
Agencies SEO - Sasatry ny maso sy masoivoho SEO aho. Raha ny marina dia tsy sokajiko ho consultant SEO akory aho. Na dia nanampy orinasa an-jatony tamin'ireny olana ireny aza aho nandritra ny taona maro, nahomby aho satria tsy mifantoka amin'ny fanovana algorithm sy fiverenana miverina amin'ny algorithm… mifantoka amin'ny zavatra niainan'ny mpitsidika anao sy ny tanjon'ny fikambanana misy anao aho. Raha manandrana milalao algorithme ianao, dia tsy handresy ireo mpamorona Google an'arivony sy hery informatika lehibe ananan'izy ireo… matokia ahy. Agence SEO be loatra no misy noho ny fizotran'ny toetr'andro sy ny algorithman'ny lalao - izay tsy mandeha fotsiny, fa manimba ny faharetan'ny fahefan'ny fikarohana anao. Izay masoivohona rehetra tsy mahatakatra ny varotrao sy ny paikadim-barotra dia tsy hanampy anao amin'ny paikadinao SEO.
Fanamarihana iray momba izany - raha manandrana manangona volabe vitsivitsy amin'ny fitaovana na teti-bolan'ny mpanolo-tsaina ianao… dia hahazo izay tena aloanao. Ny consultant tsara dia afaka manampy anao hitondra fifamoivoizana biolojika, hametraka ny zavatra antenaina, hanolotra torohevitra momba ny varotra mihoatra ny motera fikarohana ary hanampy anao hahazo fiverenana tsara amin'ny fampiasam-bolanao. Ny loharanom-bola mora vidy dia mety handratra ny filaharanao ary handray ny vola ary hihazakazaka.
Ahoana ny fomba hampitomboana ny laharam-pahamehanao
fotodrafitrasa - Alao antoka fa tsy misy olana ny tranokalanao izay manakana ny motera fikarohana tsy hanondro azy tsara amin'ny fomba mahomby. Midika izany manatsara ny rafitra fitantanana atiny - ao anatin'izany ny rakitra robots.txt, sitemap, fahombiazan'ny tranokala, mari-pamantarana lohateny, metadata, firafitry ny pejy, ny fandraisan'anjaran'ny finday, sns. Tsy misy manakana anao tsy hanana laharana tsara izany (raha tsy hoe manakana tanteraka ny milina fikarohana tsy handrindra ny tranokalanao ianao), mandratra anao amin'ny tsy fanamorana ny mandady, manisy index ary manome ny toeranao araka ny tokony ho izy.
Content Strategy - Ny fikarohana, ny fandaminana ary ny kalitaon'ny atiny dia manakiana. Folo taona lasa izay, dia nitory ny fitadiavam-bahaolana sy ny habetsaky ny atiny aho mba hiteraka laharana tsara kokoa. Ankehitriny, manome torohevitra hanohitra an'izany aho ary manitrikitrika ny mpanjifa hanangana tranomboky atiny izay dia feno, mampiditra haino aman-jery, ary mora fitetezana. Ny fotoana bebe kokoa ampanjifaina ao amin'ny fikarohana siantifika, fikarohana mifaninana, user experience, ary ny fahafahan'izy ireo mahita ny vaovao tadiaviny, arakaraka ny maha-tsara kokoa ny laninao no laniana sy zaraina. Io kosa dia hitondra fivezivezena ara-organika fanampiny. Mety manana ny atiny ilainao ianao, fa raha tsy voalamina tsara dia mety handratra ny filaharan'ny motera fikarohana anao manokana ianao.
Paikady fampiroboroboana - Ny fananganana tranokala mahafinaritra sy ny atiny mahavariana dia tsy ampy… tsy maintsy manana tetikady fampiroboroboana ianao izay mitondra rohy miverina amin'ny tranokalanao mba hitondran'ny motera fikarohana anao ambony. Izany dia mitaky fikarohana mba hamantarana ny filaharan'ny mpifaninana aminao, raha afaka mitodika any amin'ireo loharano ireo ianao, na afaka mahazo rohy miverina avy amin'ireo sehatra ireo miaraka amin'ny fahefana lehibe sy mpihaino mifandraika amin'izany.
Tahaka ny zava-drehetra ao amin'ny tontolon'ny varotra, tonga amin'ny olona, ​​ny fizotrany ary ny sehatra io. Aza hadino ny miara-miasa amin'ny mpanolo-tsaina nomerika marketing izay mahatakatra ny lafiny rehetra amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana ary ny fiantraikan'izany eo amin'ny fitsangatsanganan'ny mpanjifanao amin'ny ankapobeny. Ary, raha liana te hahazo fanampiana ianao dia omeko ireto karazana fonosana ireto. Manomboka amin'ny fandoavan-trosa izy ireo handrakofana ny fikarohana - avy eo manao fifanakalozana isam-bolana izay manampy anao hanatsara hatrany.
Mifandray amin'ny Douglas Karr
Tags: tranomboky atinypaikadin'ny atinylaharana biolojikafikarohana biolojikafironana fikarohana organikafahitana fikarohana biolojikaSEOconsultant seoconsulting seofifindra-monina seoseo filaharanaseo tools
DroppTV: Mampiasa AI hamantarana sy hivarotana vokatra amin'ny horonan-tsary